I-HOROSCOPE YAKHO KASEPTEMBA KA-2021-IXESHA LOKUGOBA KUNYE NEMIDA - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
IHoroscope yakho kaSeptemba ka-2021-Ixesha leCuffing kunye neMida
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi IHoroscope yakho kaSeptemba ka-2021-Ixesha leCuffing kunye neMida
Molo iXesha leVirgo! Ezi nyanga zimbalwa zidlulileyo zisinike inkuthazo yokuvumisa ngeenkwenkwezi ukuba samkele ubuchule bokuyila, sifune i-adventure, kwaye sizibeke phambili. Njengoko uSeptemba ejikeleza ikona lixesha lokuyeka amandla asendle kaLeo kwaye wehle kwishishini. Septemba 2021 Iziganeko zokuvumisa ngeNkwenkwezi: ngoMvulo, ngoSeptemba 6: INyanga eNtsha eVirgo ngoLwesihlanu, Septemba ...
IHoroscopesNgoSeptemba 1, 2021
Molo iXesha leVirgo! Ezi nyanga zimbalwa zidlulileyo zisinike inkuthazo yokuvumisa ngeenkwenkwezi ukuba samkele ubuchule bokuyila, sifune i-adventure, kwaye sizibeke phambili. Njengoko uSeptemba ejikeleza ikona lixesha lokuyeka amandla asendle kaLeo kwaye wehle kwishishini.
NgoSeptemba 2021 imisitho yokuvumisa ngeenkwenkwezi:
NgoMvulo, ngoSeptemba 6: INyanga eNtsha eVirgo
NgoLwesihlanu, ngoSeptemba 10: IVenus ingena kwiScorpio
NgoLwesibini, ngoSeptemba 14: UMars ungena eLibra
NgoMvulo, ngoSeptemba 20: Inyanga epheleleyo kwiiPisces
NgoLwesithathu, ngoSeptemba 22: Ilanga lingena eLibra
NgoMvulo, ngoSeptemba 27: I-Mercury Retrograde kwiLibra
INyanga eNtsha kwiVirgo
Ungabethwa ziimvakalelo zokucotha njengoko siqala inyanga ngeyethu INyanga eNtsha kwiVirgo ngoSeptemba 6. Kukho imiba emithathu emihle eyenzekayo ngosuku olunye: iVenus trine Jupiter, Mars trine Pluto, kunye ne-Sun trine Uranus. Le miba izisa amandla asisiseko afunekayo kubomi bethu. INyanga eNtsha isicela ukuba sihlole ukuba zeziphi iindawo zobomi bethu ezingasangeni kwiinjongo zethu ezinkulu. I-Virgo ilawulwa yi-6H yezenzo zemihla ngemihla kunye nesiqhelo. INyanga eNtsha kwiVirgo icela umngeni ukuba ucoce indlu kwaye ususe nantoni na engayisebenzisiyo injongo yakho ephezulu. Oku kuya kubaluleka kuba kwangalo mini I-Mercury ingena kwisithunzi sayo sangaphambili phambi kweMercury Retrograde eLibra ngoSeptemba 27.
amanani okucheba iinwele kwi-mm
IVenus ingena kwiScorpio
Ukwenza olu lwazi lunzulu kuya kuba yinto ebalulekileyo njengoko IVenus ingena kwiScorpio ngoSeptemba 10. La mandla aya kuzisa umoya wokubaluleka kubudlelwane bethu. Ngexesha le-cuffing lihamba lihamba lijikeleza ngokupheleleyo kwaye IMars ingena eLibra ngoSeptemba 14; ngoku lixesha lokuxelela loo mntu ukhethekileyo indlela ovakalelwa ngayo ngokuzibophelela ngokunzulu. Isimbo sonxibelelwano sozakuzo lweLibra siya kunceda kwisimbo sokuncokola esiqokelelweyo kwezi ntsuku zimbalwa. Oku kwenza ibe lixesha elifanelekileyo lokuvakalisa izikhalazo zethu, ukulungisa ukungavisisani, kunye nokujongana nemiba ngobuchule.
Inyanga epheleleyo kwiiPisces
Wonke lo msebenzi unzima ukhokelela kwi Inyanga epheleleyo kwiiPisces ngoSeptemba 20. Eli lixesha lokuthandana ubomi bakho! NgoSeptemba ugcwele iimvakalelo ezinzulu kunye ezinzima. Nangona unokuziva unyanzelekile ukuba ukhase phantsi kwamaqweqwe, eli lixesha elifanelekileyo lokuphinda uqhagamshele izihlobo kunye nobathandayo. Ngokukwanjalo ukuba uchithe eyona nxalenye ingcono yalo nyaka unqanda iimvakalelo zakho, iNyanga ePheleleyo inokuzisa iimvakalelo ezithile.
Ilanga lingena eLibra; Fall Equinox
Olu tshintsho kwiimvakalelo zethu kunye nobuhlobo beza kanye njengoko ilanga lingena eLibra kwi Fall Equinox ngoSeptemba 22. La mandla okuvumisa ngeenkwenkwezi adityanisiweyo aya kubangela ukuba kwenziwe izigqibo ezinkulu. Imigca iya kuzotywa esantini kwaye imida iya kumiselwa. Kwabanye benu - ukucaca kuya kuza ngendlela yokukhetha ekugqibeleni ukushiya imeko enetyhefu. Ukuyeka imisebenzi engakuzalisekisiyo, ukushiya amaqabane ayeke ukuzama, kunye nokunye.
I-Mercury Retrograde kwiLibra
Kwabanye - eli iya kuba lixesha lokucinga ngomsebenzi owenze kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ungaziva unxunguphele okanye uzisole ngento ebinokuba yiyo. Kodwa musa ukwenza ngokweempembelelo zakho zokuthumela i-ex yakho emva! Kusenokwenzeka ukuba uphenjelelwe ngowokugqibela I-Mercury Retrograde yonyaka eLibra ngoSeptemba 26.
I-Mercury Retrograde kwiLibra:
NgoSeptemba 6: I-Mercury ingena kwi-retrograde shadow zone
NgoSeptemba 26: Izikhululo zeMercury zibuyisela umva kwi-25 ° 28' Libra
Ngo-Oktobha 9: I-Mercury idibanisa ilanga kwi-16º35′ Libra
Ngo-Oktobha 18: Izikhululo zeMercury ziqondisa kwi-10 ° 07' Libra
NgoNovemba 2: I-Mercury ishiya i-retrograde shadow zone
I-Mercury ilawula unxibelelwano kunye nempembelelo yokubuyisela kwi-Libra inokudala ukudideka kunye nokunganxibelelani kakuhle. Lo mjikelo uya kuvala iincoko ezaqala ngoJanyuwari ka-2021 xa iMercury yayibuyisela umva e-Aquarius. Kungcono ukubeka ifowuni yakho kwisimumu kwaye ulinde kude kube ngoku I-Mercury Retrograde igqiba umjikelo wayo ngoNovemba 2.
Ngokubanzi - inyanga kaSeptemba izele ziziganeko ezininzi ezinzima kodwa ezinomvuzo. Eli lixesha lokuba uzibeke phambili. I-Libras iya kuziva icela umngeni ngamandla kule nyanga njengoko bekhupha iinxalenye zobuni babo ababebambelele kuzo ukuze bachukumise abanye. Ukubekwa kweGemini kuya kuba nonxibelelwano olumnandi kwaye bazive bekhululekile kwimbonakalo yabo yokuyila. Kwaye nangona I-Capricorn inokuvakalelwa ngathi izinto ziphathwa -I-Mercury Retrograde inokubangela ukuba ubuze ikhondo lomsebenzi wakho wangoku.
yintoni imiqondiso yam ye-zodiac e-3
uphawu lokunyuka kwe-zodiac
ukuphuma kwekhaltyhuleyitha yelanga
iinwele zamadoda aneenwele eziwavy
uphawu lwam lwelanga
inyanga kunye neempawu zokuphuma